Maxay Tahay Sababta Keentay In SSC God Ku Dhacdo 1969? Yaase Usabab Ah In Ay Godkii Kasoo Baxdo?
Waxaan ku bilaabaya magaca alle ee naxariista guud iyo midda gaarka ah leh………………………
An u soo noqdo MAXAY TAHAY SABATA KENTAY IN SHACABKA SSC KU DHACO GOD?
Waxan qaba dhibatadda ku dhacdey beelweynta SSC in ay tahay dadkii ka dhashay rer SSC ee majaraha u qabtay tan iyo 1960 oo an dadnimo lahayn. Tas oo ay sabab u tahay Han la ‘aan, Waddaniyad la’an, Damiir lahayn , Karti la’aan iyo iyagoo ku qanacsan in ay rero kale oo lamid ah dhisan iyo shisheye kalkalnimo .
Haddaba anigu waxaan qaba in ay sabab u tahay.XILIGAAS WAXAA ISKULKA LA GEEYN JIREY QOFKA AN WAXBA KU FICNEYN, hadey tahay Xolaha,Dabecada ,DHaqalaha,Maskaxda iyo Iwm . Marka waxa la dhihi jirey bal in u Iskulka galada wax ku noqdo inaga geeya .Waxana u marqatiya dawladii kacanka ka hor waxaa dhacdey niman wasiro ka ahaan jirey ayaa waxaa ka yabay Oday abgal ah oo la dhihi jirey Farax Galoley ,markaas ayuu yidhi war waxa dhulbahante ma soo doorane ma waxaa soo dortay dad kale. Waxaa iyaduna marqati madonto ah 1960 markii somaliya ay qadatay xoriyadda dhulbahante waxa u laha dhul u gar ah ama Gobol u gar ah oo la oo yaqano dhulbahante land oo xudud leh waxana W/qoyiga Somaliya aha hal gobol oo hoos taga CADAN .
TUSAALE ahan dhibatoyinka ay baden rer SSC waxaa ka mid ah 1962 besha dhuloos waxay gashay good dheer oo ay ku rideen raga an kor ku xusey. Waayo waxaa la babiyey dhamanba tariikhdii ,degankii ,mustaqbalkii jiilka soo koraya waxan caro dhulbahante la hoos geyey Burco oo ah banaan waxana lagu magaaleyey nin u dhashey rer SSC.
W/qoyiga somaliya waxa laga dhigay labo gobol oo logu daneeyey beesha Isaaq. markas ay waxaa lagu sheekeyey carurta rer SSC gumaysigii w/soamaliya waxa u ah labo gobol wana been waxa u aha hal gobol.Tan labaad waxay dhacdey 1982 waa markii deganka rer SSC la hoosgeyey Garoowe oo ah banan dabayli ka dhacayso sida Lascanood, Xudun ,Taleex iyo ilaa Caynabo waxana halka lagu wayey magaca NUGAAL oo beesha SSc can ku ahayd. Waxa kale oo jiray magaladda Xalin oo dhacda jidka isku xidha Garoowe iyo Qadho oo la mari jirey xiligii ka horeysey jidka lamiga ah ayaa laga lexiyey .wadna xasusataan awooda rer SSC ku lahayen dawladii kacanka .
Waxa kalo oo jirey niman iyaga oo geela la jooga lagu qortay Xoog iyo Dherer oo iyaguna aminsan in amar lisiyo oo ay hoos jogan khayrkood, an aqoon tani waa hooyadaa ,waa Edadaa iyo lama huran waa dadkaga oo ay marqati u tahay kuwaa manta joga Hargeysa oo u eg adoomo iyo kuwa garoowe jooga oo ad modo in ay u falan yihiin faroole oo ay dulinimo oo dhami isugu tagtay.Waxana qabaa ninkii rag aha ee lagu baxsan laha labatankii sano ee tagey iyo intii xoriyadda ka danbeysey oo rag wax la qaybsan lahaa wuxu ku dhintey badiyaha ama u ku rafadsan yahay.Manta waxa ka tagen M/lascanood waa wax laga naxo waa wax qof kasta oo damiir leh ka dhidhiyo marka waxan u shegay shacabka xalasha ah in an ka korno isticmalka magaca jifiyaha ee uu adegsaddo wax magaratadda u shaqaysa reraha deriska ah oo u nin walba walaalkii ama kan cid ugu xiga ee manta gayeysiiyey dhibka ka jira degankena qabto.
YAA U SABAB AHAA IN AY GODKA 1962 KA SOO BAXDO :Waxa mahad oo dhan iska leh ALLAHA inaga abuurey nafta keliya ee Adan. Waxan u mahad naqayaa G/jama G/cali oo ah garaad guud ee rer SSC oo sabab u ahaa in ay SSC godka ka soo baxdo iyo nin walba oo wax sii saray waxana alaha uga baryayaa intii ku dhimatey jihaadka jano iyo naxariista eebe . Waxan aminsanah shirka khatumo in u ahaa shirkii u rabay 20/10/2007 uu garaadku ku qabto Lascanood lakiin waxay ka cadheysiisey labada mamul ee hareraha iyo Itobiya. Waxaney labada mamul aminsanayeen sawirka u sawiray xafidu laahi Amiin Camir iyo Itobiya oo aminsan haddii rer SSC midooban Somali oo dhan ayaa midobaysa.Waxana garaad jama leyahay allaha ha ka abaal mariyo samirka iyo dhabar adeyga aad mujisey waxana kugu habalyeynaya allahana ka baryaya adiga oo nool in aad aragtid geedkii ad aburtay oo midho dhalay. Waxana shacabka rer SSC uga cudur darayaa haddaan nahay rer Taleex in anan raali ka ahayn webka wata magaca Taleex ee fidnadda kula dhex jira shacab weyna rer SSC .
nuradiin211@hotmail.com J/Artan from Taleex ssc Somaliya